ओहागुरो : किन जापानीहरु आफ्नो दात कालो रंगले रनगाउदथिए ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > ओहागुरो : किन जापानीहरु आफ्नो दात कालो रंगले रंगाउदथिए ?
ओहागुरोको अनौठो पारम्पारिक अभ्यासमा जापानीहरु आफ्नो दात कालो रंगले रंगाउछन। अवश्य पनि, यो अभ्यास अहिले मारी सकेको छ, र आजकल जापान र विश्वभरिका मानिसहरू आफ्नो दाँत सके सम्म सेतो र चम्किलो होस् भन्ने इच्छा गर्दछन्। आजकल दाँत सेतो पार्नु सामान्य र बढ्दो लोकप्रिय प्रक्रिया हो।
तर परापूर्वकालमा, कालो रंगको दाँतलाई जापानमा स्ट्याटस प्रतीकको रूपमा हेरिन्थियो। जापानको साथसाथै फिलिपिन्स, लाओस, भियतनाम, थाइल्यान्ड, भारत र चीन लगायतका अन्य देशहरूमा पनि यो सामान्य अभ्यास थियो।
रंग लागाउने प्रक्रियामा जापानमा खानेमिजु भनेर चिनिने मिश्रणको प्रयोग गरीद थियो। यसमा फलामको कण, चुक अमिलो, चिया र चामलको वाइन हुन्छ। यसलेनै दात कालो रंगको बनाउदथियो।
इतिहाशिक प्रतिबेदन हेर्ने हो भने यो प्रक्रियाले दातलाई कालो बनाउने भएता पनि निकै दुर्गन्दित बनाउथियो। त्यसमाथि यसको असर केहि दिनको लागि मात्र हुन्थ्यो। बिस्तारि लगाएको कालो रंग जाने गर्दथ्यो। त्यसकारण मानिसहरु निकै ध्यान पुर्याएर यो प्रकिया अपनाउदथिए।
「白い歯の美人」っていつから？今週のおすすめ資料は「歯磨の歴史」。10/4は17時まで開館しています。ポーラ文化研究所では、近々お歯黒水作りを計画中 https://t.co/lDa2DeOY2b #おすすめ資料 #歯磨 #お歯黒 #歴史 pic.twitter.com/bVCoa5s73x
— ポーラ文化研究所 (@POLA_bunken) October 4, 2017
ओहागुरोको ईतिहास निकै लामो छ। यो हेइयान युग (७९४-११८५) भन्दा अगाडी देखिने प्रचलनमा आएको देखिन्छ। भनिन्छ रंगको दाग कोफुं युग (२५०-५३८)बेलाको भेटिएको हड्डी र दातमा पनि देखिएको थियो। तर यो परम्परा हेइयान युगको अन्त्य तिर निकै लोकप्रिय भएको देखिन्छ।
त्यति बेला पनि यो खास गरि अलि धनि माथिलो स्थरको कुलीन वर्गमा चल्तीमा रहेको पाइन्छ। बिवाह गर्ने उमेर भएका जवान युवतीमा यो एक फेसनको रुपमा रहेको थियो। उनीहरु आफ्नो अनुहार सेतो रंग र दात कालो बनाउदा सुहाउने भन्ने सोच्दथे।
यो चल्तीको फेसन बन्नुको अर्को कारण भने त्यति बेला धेरैको दात पहेलो हुने भएर पनि हो। झन् महिलाहरुले आफ्नो अनुहार सेतो बनाउने हुनाले पहेलो दात जहाँ प्रबल रुपमा देखिने हुनाले पनि महिलाले यो तरिका अपनाए। उनीहरुलाई कालो दातले ठुलो र सुन्दर मुस्कान देखाउने भन्ने बिस्वास थियो।
टाढाबाट हेर्दा यो भ्रम अझ प्रभावकारी देखिन्थ्यो। सड्न र बृद्धा भएको पहेंलो दाँतलाई ढाक्नको अलावा ओहागुरोले दाँतलाई कडा बनाउनका साथै गुहा र अन्य दाँत र गिजाको समस्याबाट बचाउन मद्दत गर्दथ्यो। कुलीनहरू बाहेक समुराईले पनि आफ्ना मालिकप्रति वफादारीको प्रमाणको रूपमा दाँत कालो बनाउथे।
अन्य युगमा ओहागुरो
— 綾村 (@onitowani) September 4, 2017
हेइयान युग पछि ओहागुरोको चलन यति लोकप्रिय बन्यो कि अन्य युगमा पनि यो अपनाइन थालियो।
मुरोमाची अवधिमा, ओहागुरो वयस्कहरूको बीचमा लोकप्रिय थियो, र सामान्यतया पैसा भएका मानिसहरू माझ। यद्यपि यो सेनाका कमाण्डरहरूका छोरीहरूमा पनि सामान्य थियो। यो सामान्यतया ८-१० बर्षे उमेरका केटीहरूमाझ प्रचलित थियो जुन उनीहरूको वयस्क हुनलागेको उमेरको प्रतीक थियो। यो उमेर आजको प्रचलित भन्दा निकै सानो उमेर हो।
ओघागुरोको अर्को रोचक प्रयोग केही सैन्य कमाण्डरहरू आफैंले गरेका थिए, विशेष गरी यदि उनीहरू लडाईबाट भएको चोटपटक र अनुहारको विकृतिलाई ढाक्न प्रयोग गर्दथे। तिनीहरू प्राय: जसो महिलाको श्रृंगार लगाउदथे र दाँतहरू कालो बनाइ दाग छोप्दथे।
सन् १६०३-१८६८ सम्मको एदो अबधिमा पनि ओहागुरो प्रचलनमा थियो। तर यसको लोकप्रियता निकै घटिसकेको थियो।यो समयमा बहने बिबाह गर्ने उमेरमा महिलाले श्रीमान खोज्न आफ्नो दात कालो बनाउदथे। यो पछि गेइशा, वेश्या र बिबाहित महिलामा पनि यो चलन देखियो।
कुलीन र धनि पुरुषहरु र राज घरानाका मानिसले यो तरिका अपनाएपनि उनीहरुमा यसको लोकप्रियता घटेको थियो। त्यसको कारण उनीहरुलाई यो तरिका निकै लामो, झन्झटिलो र पुरानो फेसन लाग्न थालेको भएर हो, गाउ घरमा मानिसहरु काममा निकै व्यस्त हुने भएकाले उनीहरु महत्वपुर्ण चाड बाडमा मात्र आफ्नो दात रंगाउथे।
१८७०मा मेइजि युग सुरुभए संगै जापानमा आधुनिकीकरण पनि सुरु भयो। यो बेला ओहागुरोलाई प्रतिबन्धनै गरियो। पछि मेइजि पुनर्स्थापना संगै यो चलनलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो। तर त्यस पश्चात यो चालन आफैमा हराएर गयो।
हजुरको के छ बिचार?
हजुर आफ्नो दात पहेलो भएको हेर्न चाहनु हुन्छ कि कालो ? आजको नबिन डेस्टिस्ट्रि प्रविधिले हामि पहेलो दातलाई सजिलै सेतो र चम्किलो बनाउन सक्छौ। त्यसैले हामीले ति पुरनो उपाए अपनाउनु पर्दैन
आजकल ओहागुरो चलचित्र, नाटक र केहि उत्सवमा मात्र देखिन्छ। केहि गेइस्याले आज पनि आफ्नो दात केहि बिशेष अवसरमा रंगाउछन। त्यसैले हजुर क्योटो जानु बह्यो भने यो बिरलै भएनी देख्न पाउनु हुन्छ। विश्वको अन्य देश जस्तै भारत र मादागास्करको केहि समुदायमा यो चलन देख्न सक्नु हुनेछ।
यदि हजुरलाई आजको युगमा ओहागुरो कस्तो देखिन्छ भन्ने उत्सुकता छ भने
यो भिडियो हेर्नुहोस्।